Izindaba - Ungasikhetha Kanjani Isiphathi Sezicubu?
Ungasikhetha Kanjani Isiphathi Sezicubu?
Kulezi zinsuku, isibambi sezicubu sihlonyelwe kuwo wonke amahhotela, indawo yokudlela nezindawo zangasese, futhi singahlangabezana nezidingo zethu. Lapho ukhetha ukuhlomisa amathuluzi enhlanzeko, ophethe izicubu kufanele. Kungavimbela amanzi ekuhlakazekeni. Kuyinto elula kakhulu. Vele, izindawo zokudlela eziningi noma amanye amakhishi nawo anesiphathi sezicubu.
Ungasikhetha kanjani isibambi sezicubu?
Njengoba ukusetshenziswa kwesiphathi sezicubu kuyinto ejwayelekile, futhi kunezinhlobo eziningi emakethe, kuthatha isikhathi esithe xaxa ukukhetha umnikazi ofanele wezicubu.
Amahhotela adinga isibambi sezicubu nangaphezulu, futhi adinga izinhlobo zensimbi engagqwali, ngoba insimbi engagqwali kulula ukuyihlanza. Kuphephile futhi kunempilo yenkonzo ende, kukhombisa imvelo yehhotela kangcono.
Indawo yokugezela yayinomswakama kakhulu futhi ishawa yagcwala ngamanzi. Isiphathi sezicubu esinesivalo simane sivimbele amanzi ukuba agobhoze kusiphathi sezicubu.
Kumnikazi wephepha langasese, insimbi engagqwali iyona engcono kakhulu. Ithusi elihlanzwe ngokukhethekile liyatholakala, elingenamanzi futhi elihlala isikhathi eside.
Ngenxa yokuthi indawo yokudlela iyindawo yokudlela, kuzoba nesibambi sezicubu etafuleni, futhi kuyindawo enhle yokusebenzisa isibambi setafula letafula.
Ngokuvamile, ikhishi alisetshenziswa kakhulu futhi indawo yekhishi incane kakhulu. Uma ufuna ukukhetha, kungcono ukhethe isibambi sezicubu esingathathi isikhala.Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi isiphathi sezicubu akufanele sibekwe eduze kakhulu kwemithombo yamanzi nemithombo yokuthungela.
Lapho ukhetha isibambi sezicubu, asikwazi ukunganakwa.Kufanele futhi unake isitayela, intengo nekhwalithi yendawo oyidingayo.
I-Dongguan Shengrui Metal Crafts Co., Ltd.is ingumkhiqizi osebenza kahle futhi othumela izinto emazweni angaphandle ngokukhethekile ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwezinhlobo ezahlukahlukene zezemidlalo zeziphanyeko zezemidlalo nensimbi yezemidlalo. izinsimbi zobucwebe bensimbi njll.
Yonke imikhiqizo yethu ihambisana nezindinganiso zekhwalithi zamazwe omhlaba.Izikhungo zethu ezihlome kahle, abasebenzi abaqeqeshwe kakhulu nokulawulwa kwekhwalithi okuhle kuzo zonke izigaba zokukhiqiza kusenza sikwazi ukuqinisekisa ukwaneliseka kwamakhasimende okuphelele.